Kenya: Maleeshiyada Al-Shabaab oo 3 Qof ku dishey. – idalenews.com
Kenya: Maleeshiyada Al-Shabaab oo 3 Qof ku dishey.
Idalenews:Kooxo la aaminsanyahay in ay ka tirsan yihiin maleeshiyada Shabaab ayaa gowrac ku dilay 3 kamid ah dadka ku dhaqan xaafadda Maleli oo kutaala Jaziiradda Lamu ee dalkasi Kenya,iyagoo sidoo kale gubay guryo halkaasi kuyaalay, markii ay weerar ku qaadeen waaberigii saaka.
Guddoomiyaha deegaankaasi Gilbert Kitiyo,ayaa Jariiradda The Daily Nation ee ka soo baxday dalka Kenya u sheegay in 3 qof ay dileen kooxahaasi, balse dadka deegaanka ayaa sheegayaa in ay 4 qof ahaayeen dadka la dilay.
Waxaa goobtaasi gaaray ciidamo iyo saraakiil Booliis ah oo uu maamulka u diray halkaasi, si ay u dabagaalkaan kooxihii falkaasi ka dambeeyey,falka ayaa dhacay xili saacaddu ay ahayd 12:00 ee saqdhii Dhexe ee xalay.
Ragii weerarkaasi fuliyay ayaa ku baxsaday meelaha Keymaha ah ee halkaasi u dhow, sida lagu yaqaano weerarda argagixisadu ay fuliyaan,sida ay sheegayaan saraakiil katirsan Dowladda Kenya.
Kenya weli kama hadlin sababta loo beegsaday dadkaasi iyo waxa ay ahaayeen,balse waxaa la xaqiijiyay qura in 3 qof la dilay.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in uu soconaya howlgal ballaaran oo ay wadaan ciidamada ammaanka dalkaasi, kuwaasi oo baadi goob ugu jiray sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen kooxaha argagixisada.
Amiin Artis “soo sheegida qofka laga shakiyo waa qaabka aan ku sugi karno Amaanka”
Dalka Spain: 5qof Argagixiso ah oo lagu toogtay